Shakhsiyaadka iyo qoysaska | COVID-19 In Your Language
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay: 21 February 2022
Ka saarid la'aan guryaha
Ka saarid guryahya waxaa la joojoneyaa muddo lix bilood ah gobolka iyo territoriska. Mulkiileyaasha iyo kireystayaasha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay ka hadlaan heshiis muddada-gaaban ah. Ka hubi dowlad-goboleedkaaga ama terteriskaaga wixii faahfaahin dheeri ah.
Xulashada qiyaasta qaadashada ugu yar ee hawlgabnimada
Shuruuddaha waxa ugu yar looga goosan karo hawlgabyada ku saleysan xisaabaadka iyo alaabada la midka ah waxaa hoos loo dhigay 50% sanadka 2019-20 iyo 2020-21 si looga caawiyo yareynta khasaaraha weyn ee suuqyada maaliyadeed ee ka dhashay mosiibada COVID-19,
Macluumaad dheeri ah, booqo www.ato.gov.au/drawdown
Lacag bixinta Shaqada JobKeeper
Lacagta ay bixiso dowladda ee loo yaqaan 'JobKeeper Payment' waxuu ahaa kaabis kumeelgaar ah oo loogu talagalay ganacsiyada ay sida weyn u saameeyeen coronavirus (COVID-19).
Loo-shaqeeyeyaasha u-qalma, ganacsatada kaligood ah iyo hay'adaha kale ayaa codsan karey inay helaan lacagaha JobKeeper ee shaqaalahoodaa u-qalma. Tan waxaa dib loo lasiiyey doonaa loo shaqeeyaha bilwalba oo ay bixineyso ATO.
Ganacsiyadu waxay iska diiwaangelin kareen Lacag-bixinta Adeegga ee loo maro Adeegga Ganacsiga ee ATO, adeegyada internetka ee ATO iyagoo adeegsanaya myGov haddii aad ay ahaayeen ganacsade keliya, ama loo maro canshuur diiwaangashan ama wakiilka BAS.
Macluumaadka ku saabsan lacag bixintaJobKeeper gal www.ato.gov.au/JobKeeper.
Lacagta Shaqaaleynta ee JobMaker
Nidaamka shaqaaleynta Shaqaalaynta ee ah JobMaker waa mid dhiirrigelin siisa ganacsiyada si ay u shaqaaleeyaan dhalinyaro shaqo doon ah oo dheeri ah oo da'doodu tahay 16-35 sano.
Loo-shaqeeyeyaasha u-qalma ayaa u heli kara lacag bixinta Jobmaker shaqaale kasta oo dheeraad ah oo u qalma oo ay shaqaaleeyaan inta u dhexeysa 7 Oktoobar 2020 iyo 6 Oktoobar 2021.
Ka eeg www.ato.gov.au/jobmakerhiringcredit wixii macluumaad dheeraad ah
Ka dhig nidaamka mid nabad ah oo caddaalad ah
Ka taxaddar khiyaamooyinka isku dayaya inay kugu khiyaameeyaan inaad lacag bixisid ama aad bixisid macluumaadkaaga shakhsiyeed.
Khiyaamooyinlayda ayaa inta badan iska dhigaya inay ka socdaan ururo lagu kalsoon yahay, sida Xafiiska Cashuuraha ee Australiya (ATO). Haddii aanad waligaa hubin in xidhiidhka ATO aanuu dhab aheyn, ha ka jawaabin. Waxaad wici kartaa Khadka Tooska ah ee 'ATO Scam Hotline' oo ah 1800 008 540 ama booqo www.ato.gov.au/scamswixii macluumaad dheeri ah.
Bixinta iyo adeegyada dowladda
Adeegyada Australiya waxaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan dhaqaale ahaan xitaa haddii aadan hadda helin lacagta Centrelink. Uma baahnid inaad tagtid xarunta adeega. Waad isticmaali kartaa ikhtiyaaradayada adeegga-iskaa. Sidoo kale waad heli kartaa shaqaalaha bulshada. Haddii aad mar hore macmiil aheyd, waxaa jira isbeddelo ku yimid lacag-bixinnadayada iyo adeegyadeyda sababo la xidhiidha coronavirus (COVID-19). Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan dhowr luqadood ka eeg servicesaustralia.gov.au/covid19
Haddii ay dhibi kaa heysato bixinta biilashaada gaaska iyo korontada (pdf, 41.51 KB)
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay 30-12-2021